Archive du 20170902
Marc Ravalomanana Roso hatrany
Vahinin’ny “Vitrine du Vakinankaratra” omaly ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Fifidianana 2018 Hary Andrianarivo ihany koa …
Nanao fanambarana teto Antananarivo ireo solontena nalefan’ireo Raiamandreny avy any amin’ny faritra Amoron’i Mania sy Matsiatra Ambony, notarihin-dRakotomanga Martin omaly.
Hery Rajaonarimampianina Manao lahateny propagandy sahady
Ahitana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina avokoa ankehitriny ireo hetsika samihafa eto amin’ny firenena.
Lalàmpanorenana “Mila ahitsy”, hoy Rakotovazaha Olivier
Misy amin’ireo andinin-dalàna sasany ao anatin’ny lalàmpanorenana no tokony hovaina, hoy ny loholona Rakotovazaha Olivier voatendry tamin’ny anaran’ny filohan’ny Repoblika.
Marc Ravalomanana Amoronana dosie maloto…
Miha miakatra ihany ny maripana eo amin’ny tontolo politika eto amin’ny firenena. Atomotra tokoa ny fifidianana, ka samy manao ny paikadiny avy saingy ao ny manao kilalao madio fa misy kosa ny manao adin’ny kanosa sy mitady fomba maloto sy mamohehitra hoenti-mandresy.
Hafahafa May ny tanàna
Mahalasa saina ny firongatry ny firehetan-javatra tato ho ato, tsy eto an-drenivohitra tsy any amin’ny faritra, toy ilay teny amin’ny toby famokarana herinaratra an’ny orinasa Aksaf Power teny Ambohimanambola, izay nahafatesana olona 3.
Ranjatohery Harilala “Mbola misy olona tsara eto.”
Mikorontana ary tsy misy fitsipika ifampitondrana loatra intsony ny fiarahamonina ankehitriny, hoy ny mpanabe sady mpahay tantara, Ranjatohery Harilala.
Hain-trano teny Mahavoky Manao ranolava ny fanampiana ireo traboina
Nisehoana hain-trano mahatsiravina teny amin’ny fokontany Mahavoky, Boriborintany Fahatelo, ny alakamisy 31 Aogositra 2017 tokony ho tamin’ny 7 ora hariva.
Fandroahana mpiasa tsy ara-drariny Voasazy ny Fiadidiana ny faritra Alaotra Mangoro
Nahazo rariny teny anivon’ny tribonaly miady amin’ny fanjakana any Toamasina ireo mpiasa valo mianadahy noroahin’ny fiadidiana ny faritra Alaotra Mangoro noho ny antony tsy fantatra.
« Champion’s League Malagasy 2017 » Niraradraraka ireo baolina maty ny andro voalohany
Nanao rarakompana ireo baolina maty tamin’ny andro voalohan’ny fiadiana ny “Champion’s League Malagasy” eo amin’ny baolina kitra omaly zoma 01 septambra 2017.
Ady totohondry Malagasy Hatao eto Antananarivo ny tompondaka nasionaly
Tsy miraviravy tanana izahay mpitantana ny ady totohondry Malagasy,
Kitra – Seksiona Ambatondrazaka Raikitra ny fifanintsanana
Ny sabotsy 2 sy alahady 3 septambra no hanombohan’ny fifanitsanana ho amin’ny fiadiana ny amboara ny seksiona Ambatondrazaka eo amin’ny taranja baolina kitra diviziona faharoa.
Basikety - U16 vehivavy Fantatra ireo tafita amin’ny manasa-dalana
Taorian’ireo lalao ampahefa-dalana vita omaly zoma 01 septambra ka nahazoana ireo vokatra :
Atrikasa, fikaonan-doha, fiofanana isan-karazany eto an-toerana, eny hatrany ivelany lava izao.
Aiza no hanohy fianarana ? Tongava ao amin’ny “Salon des études Supérieures”
Raikitra indray ny “Salon des études Supérieures” karakarain’ny Madajeune.
Salon de l’etudiant Eny Ankatso ny andiany faha-5
Toy ny mahazatra isan-taona dia mikarakara “Salon de l’étudiant” andiany fahadimy ihany koa ny Oniversiten’Ankatso.
Zandary nandika lalàna 300 no efa voaroaka
Hentitra amin’ny fampanarahan-dalàna ireo olony ny zandarimariam-pirenena ary tsy misomonga mihitsy amin’ny fanasaziana ireo mihoa-pefy.
Fonjan’Antanimora 3.356 ny voafonja ao, tsy voatsara ny 60 %
Tsy ampy ny fotodrafitrasa, mitombo isa hatrany ireo tsy voatsara. Ireo amin’ny ankapobeny no olana sedrain’ireo voafonja tazonina etsy Antanimora.